Tatitry Ny Mpisera (amin’ny Aterineto) : Niteraka Fanapahana Tranonkala Ny Fihetsiketsehana Ao Bangladesh, Fisamborana Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2018 13:00 GMT
Fifamoivozana ao Dhaka, renivohitr'i Bnagladesh. Sary avy amin'i Mashrik Faiyaz teo amin'ny Flickr (CC BY-ND 2.0)
Manome topimaso maneran-tany momba ireo fanamby, fandresena ary fironana vaovao mahakasika ny zo amin'ny aterineto eran'iza tontolo izao ny Tatitry ny Mpisera omen'ny Advox.
Mangataka làlana azo antoka kokoa ireo mpianatra ao Bangladesh — ary fifamoivoizana voarindra — ho setrin'ilay fifandonana fiara fitaterambahoaka izay nanahafaty mpianatra roa nandeha an-tongotra teo amin'ny làlana iray be olona tery tamin'ny 29 Jolay.
Nanomboka tam-pilaminana ireo hetsipanoherana saingy nivadika ho herisetra tamin'ny 3 Aogositra rehefa niteraka fifandonana teo amin'ny polisy sy ireo mpanao hetsipanoherana ireo tsaho nilaza fanolanana sy fakana olona an-keriny, miaraka amin'ny fampiasan'ny polisy baomba mandatsa-dranomaso sy bala fingotra.
Niparitaka teo amin'ny vondrona WhatsApp aloha ireo siosio ary nifanindry tamin'ny fidiran'ny Vondrona Bangladesh Chhatra, sampana tanora ao anatin'ny antoko Ligy Awami eo amin'ny fitondrana.
Miaraka amin'izany ihany, nanome baiko an'ireo mpamatsy tolotra mba hampihena ny fahazoana tambajotra amin'ny finday ny Kômisiona momba ny Fandrindrana Fifandraisandavitra ka tamin'izay dia ny tambajotra 2G ihany no afaka nandeha. Tsy nanapaka an'ireo tologtra fandefasana hafatra izany, fa nampanano-sarotra ihany koa ny fahafahana mizara horonantsary isan-karazany ary lahatsary mivantana, izay nampiasain'ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanehoana izay tena nitranga sy mba hiadiana amin'ireo filazàna diso.
Anisan'ireo nizara lahatsary teo amin'ny aterineto ny mpaka sary fanao an-gazety Shahidul Alam , izay nandrakitra ireo fihetsiketsehana tamin'ny Facebook Mivantana. Tamin'ny 5 Aogositra, nalain'ny polisy nitafy toy ny sivily ary nosamborin'izy ireo i Shahidul. Voadaroka nandritra ny fitazonana azy tao amin'ny polisy izy ary taorian'io dia nampidirina hôpitaly.
Ao Venezoela, iharan'ny tsindry ireo mpanao gazety, voabahana ireo tranonkala mpizara vaovao ary manjavona foana ireo gazety an-tsoratra.
Fipoahana iray nankarenin-tsofina izay nanapaka ny kabarin'ny Filoha Venezoeliana Nicolas Maduro no lasa antony farany ho an'ny fanapahana an'ireo haino aman-jery tao amin'ny firenena. Hatreto dia famoahambaovao isankarazany nahazatra no nitatitra fa vokatry ny drôna iray nitondra zava-mipoaka ilay feo sy ny sahotaka tampoka naterany, izay angamba andrana saika hamonoana an'i Maduro. Saingy mifanohitra ombieny ny fitantaràn'ny mponina tao an-toerana ny antsipirian'izay nitranga. Nosandain'ireo mpanao gazetylafo ny fiezahan-dry zareo hahafantatra izay tena nitranga — mpanao gazety 11 no nosamborina ary voatery namafa an'ireo sary sy horonantsary noraiketina nandritra an'ilay hetsika.
Iray amin'ireo tranonkalambaovao malaza ao Venezoela, El Pitazo (Ilay Mpisioka), no nakatona fanintelony tao anatin'ny 11 volana. Tsy afaka hidirana avy amin'ireo goavana mpanome tolotra aterineto lehibe indrindra ao Venezoela intsony ilay tranonkala, ary tsy nahazo fampahafantarana momba izany fandraràna avy amin'ny mpandrindra ny fifandraisan-davitra izany ireo tompony. Namorona sehatra maro hafa azo nisafidianana ilay fampahalalambaovao tany aloha tany, fa voabahana koa izy ireny.
Mandritra izany, famoahambaovao izay mamoaka dika an-tsoratra dia miady mafy amin'ny tsy fahampiana taratasy fanontàna gazety ao amin'ny firenena. Nitatitra ny Caracs Chronicles fa gazety miisa 40 no tsy afaka nanohy ny fanontàny printy nanomboka tamin'ny 2013. Ary tato ho ato, na ireo gazety manohana ny governemanta aza lasa tsy ampy taratasy ihany koa.
Mamily làlana ny Telegram i Iràna ary manohy misambotra mpampiasa Instagram
Tamin'ny Jolay 30, nandritra ny ora iray, novain'ny Orinasa misahana ny FIfandraisandavitra ao Iràna (TCI) ny làlan'ireo adiresy IP aterineto ho an'ny fampiharana fandefasana hafatra Telegram. Nandefa an'ireo mpampiasa azy ho any amin'ny TCI fa tsy ny lohamilin'ny Telegram, mahatonga an'ilay fampiharana ho tsy afaka nampiasaina, na nampiasa fitaovana fandingànana sivana tahaky ny tambajotra virtoaly manokana aza ireo mpampiasa.
Taorian'ireo fisamborana an'ireo olo-malaza eo amin'ny Instagram tamin'ny volana May, mbola nitohy hatrany ny fikendrena sy fisamborana ireo mpampiasa tao Iràna. Tamin'ny 16 Jolay, valo ireo vehivavy lasibika tao amin'ny Instagram ary mpiasa any ambadikin'ny fakantsary 38 no nosamborina tao amin'ny faritra atsimo tao Hormozgan.
Maleziana mpisolovava nosamborina noho izy nanontany ny mpanjaka teo amin'ny bilaoginy.
Nanao fampanantenana goavana mba hamerenana mandinika ireo lalàna lany andro sy tsy refesimandidy mikasika ny fahalalahana miteny ilay governemanta vao voafidy tao Malezia, fa mbola tsy nisy namokatra ireny. Na nisy fiovana kely aza — nalàna ny sakana teo amin'ireo tranonkalan'ny fampahalalambaovao tahaka ny Sawarak Report ary nalàna ireo fiampangana fikomiana nahazo ilay mpanao sariitatra malaza Zunar — mafy ny mamono ny fahazarana. Nantsoin'ny polisy ilay mpisolovava sady mpikatroka, Fadiah Nadwa Fikri, tamin'ny faran'ny Jolay noho ny fanontaniany teo amin'ny bilaoginy momba ny anjara toeran'ny mpanjaka eo amin'ny pôlitika. Mandalo fanadihadiana izao i Fadiah noho ny famoahana votoaty lazaina fa mihantsy fikomiana teo amin'ny aterineto.
Boto-karamaina ao anatin'ny fifidianana Indoneziana
Miaraka amin'i Kenia, India, Meksika, Etazonia ary firenena ampolony hafa, lasa ilaina ho an'ireo vondrona pôlitika Indoneziana ireo boto ety anaty tambajotra sosialy ary ireo mpitari-kevitra voakaràma. Tamin'ny faramparan'ny Jolay, nitatitra ny The Guardian fa nampiasana ireo boto mba hisy fiantraikany eny amin'ireo mpifidy tamin'ny fifidianana governora tao Jakarta (Gubernatorial) tamin'ny 2017. Nampiasa tetika betsaka ireo mmpitari-kevitra, avy amin'ny fampiasàna lahatsoratra efa nisy mba hanalàna baraka an'ireo mpifaninana, ka hatramin'ny famoronana fandrakofambaovao tsara ho an'ny kandidàny, ary hatramin'ny lahatsoratra tsotra miresaka momba ny sakafo sy mozika mba hahatonga ireo kaonty ho toy ny “tena izy”. Nasongadin'ny fikarohana nataon'ny CPIG momba ilay olana (amin'ny Indoneziana), izay fantatra ao an-toerana amin'ny anarana hoe “Tranga Kiririoka”, fa ny zavamisy dia tsy misy fitsipika napetraka mba hifehezana an'ireo mpanao pôlitika tsy hanao an'ireo fomba ireo .
Niseho tamin'ny Martsa 2018 fa ny vondrona SCL, orinasa renin'ny Cambridge Analytica, dia nanana tànana tamin'ny fitarihan-kevitra tao anatin'ny fifidianana teo aloha tao Indonesia. Na tsy misy aza ny porofo hoe tafiditra tanatin'ireo fifidianana natao teo aloha teo ireo olona misy fifandraisana amin'ny SCL, nanana fiantraikany tamin'ny tetika izay nampiasaina tamin'io fotoana io ny fomba nataon'ilay vondrona.
Te-hiverina ao Shina i Google
Tatitra avy amin'ny The Intercept navoaka tamin'ny 1 Aogositra no nitanisa ireo fihaonana sy antontan-taratasy avy ao anatiny izay mampiseho fa ato ho ato i Google dia mety hamoaka karazany voasivana amin'ny milina fikarohany ao Shina. Niala tamin'ny tsena Shinoa ny Google tamin'ny Martsa 2010 taorian'ny fanakianana hoe nanaiky ny hiaraka miasa amin'ny sivana ataon'ny governemanta. Tsy niova izany atreto — raha nisy, lasa nihahentitra kokoa — Fa ohatrany niova ny laharampahamenan'ny Google.
Tsy nanome andinindininy betsaka momba ilay hetsika ho fanta-bahoaka ny Google, ary nolavin'ireo manmapahefana ao Shina ny hoe hisy fiovan-javatra goavana. Nantsoin’ireo senatera Amerikàna ny lehiben'ny Google, Sundar Pichai, mba hiverina hieritreritra momba ny hetsiny ary mba hamaly an'ireo fanontaniana maro momba ny tanjon'ny orinasa, tamin'ny fitanisàna toerana misy ny zon'olombelona ao Shina.
Ny Fotodrafitrasan'ny NSO Mifandray Amin'ny Fikendrena ny Amnesty International sy ny Saodiana Mpanohitra – Citizen Lab (amin'ny teny anglisy)
Sotasota ety anaty aterineto atao aminireoy mpanao gazety: fanafihan'ny mpananihany – Reporters Sans Frontières
Politikam-panjakana momba ny fahafahana mahazo Aterineto ao Venezoela: fampiasambola, fotodrafitrasa ary zo ho afaka miditra, nanomboka ny taona 2000 – 2017 (amin'ny teny espaniola) – Raisa Urribarrí y Marianne Díaz, Derechos Digitales
Misorata anarana hahazo ny Tatitry ny Mpisera
Nanampy tamin'ity tatitra ity i Mahsa Alimardani, Ellery Roberts Biddle, Marianne Diaz, Rezwan Islam, Oiwan Lam, Elizabeth Rivera, Juke Carolina Rumuat, Taisa Sganzerla ary Laura Vidal
18 ora izayNepal